Arsenal oo Qarka u saaran inay hesho saxiixa weeraryahan Olivier Giroud | Starfm.co.ke	Monday, May 20th, 2013	Home
Arsenal oo Qarka u saaran inay hesho saxiixa weeraryahan Olivier Giroud
Share19.June.2012:- Warar Hoose oo laga helayo Kooxda Arsenal ayaa sheegaya in kooxdaasi ay qarka u saraantahay in ay hesho saxiixa weeraryahanka Reer France ee Olivier.
Arsenal oo dhawaanahaanba aad u baadi goobaysay laacibkaan ayay wraraku tibaaxayaan in ay haatan soo gaba gabaynayso saxiixa wiilkaan da’da yar ee reer France.
waxaana la rumaysanyahay in kooxda Gunners ay laacibkaan kusoo iibsato heshiis lacageed oo gaaraya £14million dhiilka heshiiskana dhawaan las oo afjaro.
Weeraryahanka Olivier Giroud ayaa la rumaysanyahay in uu ka midyahay dhawr laacib oo kooxda Arsenal xili ciyaareedka dambe Horyaalka hanashadiisa ugu loolamayso waxaana iminka ay ka mid noqonaysaa Arsenal kooxaha Is hubaynaya.
25-jirkaan ka ciyaaraya Horyaalka France ee Ligue 1 ayaa xili ciayareedkii dhamaday ahaa wiilka ugu goolasha badnaa Horyaalkaasi waxa uuna u dhaliyay kooxdiisa 21 gool.
Tababaraha Kooxda Gunners Arsene Wenger ayaa iminka dadaal dheer ugu jira sidii uu kor ugu qadi lahaa wooda kooxdiisa waxa uuna suuqa ka baadi goobayaa ciyaaryahano uu xodxodan karo islamarkaana wax badan ka badali kara hanaanka ciyaareed ee kooxdaasi.
Milkiilaha Kooxda Montpellier Ninka lagu magacaabo Louis Nicollin ayaa horaan u sheegay in hadii ay fasaxaytaan xidigaan ay ka bixinayaan oo kali ah aduun lacageed oo dhan 50 ama 60 million euros.
Weeraryahanka reer France Giroud oo iminka ku maqan ka qayb qaadashada tartanka Qaramada Yurub ee Euro 2012 ayaa noqonaya ciyaaryahankii labaad ee arsenal u saxiixa xagaagaan iyadoo dhawaan ay la soow areegeen laacibka Reer Germany ee Lukas Podolski .
Arsenal ayaa sidoo kale qarka us aaran inay soo xera galiso xidigo kale oo ay ku jiraan laacibka qadka dhexe ee isna qraanka France u dhashay Yann M’Vila.